Nezvedu - Xuzhou Wanda Slewing Kupa Co., Ltd.
Iyo dhayamita renji yekutakura inogona kubva kubva 200 mm kusvika 5000 mm. Zvekutsvaira mota, pane mapfumbamwe (9) akasiyana saizi anowanikwa kubva pa3 "kusvika pa25" ane anopfuura makumi matanhatu mamodheru kuti asangane zvese zvakajairwa uye zvakaringana zvinotevera zvinodiwa.
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd, yakavambwa muna Kukadzi 18, 2011. Wanda inyanzvi yekugadzirisa mhinduro yekutengesa ine slewing bearing uye slewing drive, inosanganisa R&D, dhizaini, kugadzira uye sevhisi. Iyo kambani ine simba rakasimba rehunyanzvi, rakasimba rekugadzira kugona, yakakwana yekuyedza michina, inogonesa kupa 4000 seti ye slewing kubereka uye 1000 seti ye slewing drive pamwedzi. Iyo kambani yawana ISO9001: 2015 uye CCS zvitifiketi.
Exhibition uye fekitori yekuongorora foto
Xuzhou Wanda vari kutengesa zvigadzirwa zvakanaka pamusoro penyika uye vakatumira kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi matanhatu nematunhu anosanganisira United States, Canada, Germany, Britain, Italy, India, South Korea, Russia, Singapore, Vietnam, Malaysia, nezvimwewo, vachiwana zvinowirirana. kurumbidzwa kukuru kubva kune vekunze nekune dzimwe nyika mutengi. Uye isu tanga tiri vanoenderera uye vakagadzikana mutengesi weSANY, XCMG uye Terex.
1.Wanda ine vashandi vanopfuura vanhu mazana maviri nemakumi maviri, zvinova nechokwadi chekupa kukurumidza kuburitswa, pamwe nekugona kwepagore kweanopfuura makumi mashanu emakumi mapcs.
2.Ourinjiniya yedu timu inogona kukupa yakagadziriswa mhinduro zvinoenderana nezvaunoda uye iri kushandira pamwe neTsinghua University, China University yeMining uye Technology uye Northwestern Polytechnical University pane tekinoroji yekutsvaga & kusimudzira.
3.Simba rekutengesa rakasimba rinotengesa chigadzirwa kune nyika dzinopfuura makumi matanhatu nematunhu, ichiwana kurumbidza kwakaringana kubva kumutengi wekunze nekune dzimwe nyika.
4.Special mushure mekutengesa mainjiniya vanopa mhinduro nekukurumidza mukati maawa makumi maviri nemana.